Labo kaar oo jaale ah ayaa maanta loo taagay Fahad Yaasiin - CCW | KEYDMEDIA ONLINE
Labo kaar oo jaale ah ayaa maanta loo taagay Fahad Yaasiin - CCW
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, CC Warsame, ayaa sheegay in maanta labo kaar oo digniin ah la siiyay Fahad Yaasin, kadib markii xilkii laga xayuubiyay garbihiisii, Kullae Jiis iyo Cabdiwahaab Sheekh Cali.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishkuur Warsame, ayaa Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, uga mahad celiyay tallaabada uu ugu hiilliyay sarreynta sharciga, kadib markii uu xilkii ka xayuubiyay mid ka mid ah xididdadi xasaradaha Soomaaliya.
“Waa ku mahadsanyahay RW Rooble tillaabada uu ugu hiilliyay sarreynta sharciga. Sharciga oo lagu tuntaa waxey macna tirtaa dowladnimada. Agaasimahii hay’adda socdaalka, maareeyihii iyo taliyihii garoonka waxaa ka awood badnaa wiil ka tirsan hay’adda Nabadsugidda”. Ayuu yiri Warsame.
CC Warsame, wuxuu xusay in taliyayaasha ciidanka xoogga iyo booliska ay fuliyeen amarkii Raysalwasaaraha, hayeeshee, ay kooxda Fahad Yaasiin, ka biya-diideen, isla markaana ay ku lug lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka.
Wuxuu xusan in Fahad uu heysto kaararka digniinta, isla-markaana ay macquul tahay edboonaado, hayeeshee, Warsame, wuxuu wali shaki xooggan ka qabaa in Farmaajo iyo kooxdiisu soo rogaal celin doonaan, wuxuuna Ra’iisul Wasaaraha ugu baaqay in uu sharciga ku adkaysato.
“Labo kaar oo jaale ah ayaa maanta loo taagay. Waa dhici kartaa in uu edboonaado, waxayse u badantahay in isaga iyo Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ay dagaal rogaal celin ah soo qaadaan. RW Rooble in aad sharciga ku adkaysato ayaa lagaa rabaa, sababtoo ah in badan ayaad u sabartay takrifalka Farmaajo iyo Fahad”. Ayuu sidoo kale yiri hoggaamiyaha Wadajir.